Home Wararka Kooxda Daacish iyo Amiir Fahad Yasiin ayaa ku heshiiyey in Suuqa Bakaaraha...
Kooxda Daacish iyo Amiir Fahad Yasiin ayaa ku heshiiyey in Suuqa Bakaaraha Khasab Lagu Furo.
Kadib kulan iyo heshiis dhexmaray Fahad iyo Kooxda Argagixisada ee Daacish oo shirko la ah NISA iyo Villada ayaa ciidanka Boliisk oo ay horkacayaan dhaalinyaro Fahad u qameysan waxay si Khasab ah ku fureen Suuqa weyn ee Bakaaraha kaas oo ay ganacsatadii suuqa ay dukaamadii xireen kadib markii Daacish ay kor u qaaday canshuurtii ay suuqa ka qaadan jirtay. Cabsigelin joogta ah, handaad aan la aqoon cidda ay ka imaneyso iyo cagajugleyn ciidanka dowladda ayaa isugu darsamay ganacsatada Bakaaraha.
Suuqa oo horay canshuurtiisa loogu kala qaadan jiray sidan:
30% oo laga qado dakhliga guud inta aan wax kharash ah laga gooyn waxaa iska lahaa NN oo dhinacya badan ka soo galeysay suuq.
Shabaab oo mar waliba ka masereysa NN ayaa qaadata iyana in la mid ah oo ah 30% laakiin waxaa ku jira canshuur la sii canshuuray waayo haddii uu dakhligu yahay $100, NN waxay qaatadaa $30 waxaa ganacsadaha u haray waa haray $70, laakiin Shabaab ma yeeleyso inay qaadato 30% dakhliga soo haray waxay rabtaa 30% dakhliga guud taas oo ah in $30 ee ay NN qaadatay canshuurtiisa laga qaado ganacsadaha.
Hadda Daacish ayaa ku soo biirtay oo iyana rabta $30 dakhliga guud boqolkaas dollar waxaan ganacsadaha u haray waa $10, waana sababta keentay in ay xeraan dukaamada iyo ganacsiga waayo kirada xataa iskama bixin karaan, badeecad ma soo iibsan karaan, nololna kama heli karaan
Ganacsade aan la hadallay oo aan magaciisa qarinnay wuxuu noo sheegay inta aysan meheradaha xerin maalin ka hor wixii horay ugu dhacay. Waxaa is oo gashay lacag dhan $3458 bishaas. Dowladda NN iyo Gobolka waxay qaateen $1037.40, sidoo Shabaabka waxay qaateen $1100. Waxaa I yimid Dacish oo leh waxaan rabnaa 30%dakhligii ku soo galay oo ah $3458. Halkaas waxaa maqaasiinka u soo haray $283.20.
$283.20 Waa inaan shaqaale ka bixiyaa, waa inaan kiro ka bixiyaa, waa inaan koronto ka bixiyaa waa in biyo ka bixyaa, waa inaan telefoon iyo internet ka bixiyaa, waana inaan reekeyka biilaa. Marka waxay dantu nagu khasabtay inaan xerno, laakiin yaabka maanta ayaa ah in nalaku khasabayo inaan furno iyadoo aan haba yaraatee aan canshuurihii waxba laga dhimin.
Waa maxay ujeeedada?
Waa in ganacsatada ay Xamar ka guuraan oo nolsha Xamar dhulka la geliyo.
Waa in dadka Xamar nolosha lagu adkeeyo oo ay baahi u dhintaan iyagoo guryahooda iyo dhulkooda jooga.
Waa in dadka Xamar la qaxiyo oo la xanuujiyo.
Runtii marka aad xaaladda eegtid waxaa kuu soo baxaya:
In dadka Xamar la gumeysto, lana dulleeyey oo aysan dad ahayn.
In sidii xoolihii loo iibsado oo sidii la doono laga yeelo.
Inay dhexda ugu jiraan Mafia, Shabaab, iyo Daacish oo qofkey arkaan iibsada.
In ay talada gacanta ugu jirto koox Maafiya ah Farmajo iyo Fahad oo waxay rabaan sameeya haddey dil tahay , haddey dhac tahay, haddey kufsi tahay iyo haddey boob tahay.
Warar hadda soo baxayana waxay sheegayaan in ganacsato ay dowladda NN xoog uga fureen la bilaabay in laga kaxeysto goobahooda gancsi iyadoon la ogeyn inay NISA tahay , Daacish tahay ama shabaab. Runtii waa caloolxumo iyo culeys la iska dulqaadi karo balsa la isku daawanayo. Naagtaada keen ha niikisee Ninki hora lagu necbaa.
Waa maxay doorashada laga hadlayaa mar haddii aad daawateen wareysiga naxdinta leh ee ay soo bandhigtay Hanoolaato. Waa afar qeybood ee bal daawo adiga, kadibna ka tasho waxay ku la tahay.
Previous articleRW Rooble oo si heer Sare ah loogu soo dhoweeyey dalka Imaaraadka Carabta
Next articleBaarliin Biin: Si doorashada la iiga reebo ayaa qabiilka aan ka dhashay shaki la galiyay
Howlgal Culus oo laga sameeyay Magaalada Baydhabo